All Waxaan u baahan tahay waa in Ilaah — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Absolutely ma. Waxaan uma baahnid iaydoo la adeegsanayo farsamooyinka, ilaahyo been ah, iyo hababka is-dabacsan. Waxaan ma aha inay soo jeedin halkaas. Maxaa yeelay, xataa ku dhex jira dhibaatooyin aan ku heli kartaa wax kasta oo aan u baahan tahay in Ilaah.
Anigu hadda waan ogahay annana waannu ku maqli Nasaarada odhan waqtiga oo dhan in Ilaah waa ku filan ee, in Ilaah yahay oo dhan waxaan u baahan nahay, laakiin ma uusan mar walba dareento dhabta ah. Maxay runtii macnaheedu? Waxaan ku noolnahay adduun dhacay, arrimaha weyn. Sidaas sidee Ilaah la kulmaan oo dhan of our baahida? Maxay u eg, ficil, xitaa marka wax walba waa la hartay nagu wareegsan?
Noocan ah dhibaato iyo cidhiidhi ma aha shisheeye in Ilaah ama Kalimadiisii. Waxaan arkay in Sabuurka ka todobaadkii hore iyo mar aannu u aragno doonaa isbuucaan ay Sabuurka aad soo socda, cutubka 142. David sidoo qoray SABUURRADII this. Oo waxa aan arki doonaa in salaadda this Daa'uud waa Muslimaadka ah, ciirsi, Ninkii ugu baahan caawimaad waan u qayshadaa.
Ka hor inta aan akhriyo qoraalka in kastoo, Waxaan doonayaa inaan siiyo soo jeeda qaar ka mid ah. Waxaan u aragnaa story nolosha Daa'uud kitaabkii 1 Samuel.
David waa mid ka mid kuwa ugu fiican u yaqaan nin ee taariikhda dunida ka mid ah. Waa laga yaabaa in inta badan caan ku tahay inuu soo gaartay scrappy ahaa Goli'ad. Waxa uu asal ahaan uun ku tuureen dhagaxyada qaar ka mid ah isaga oo isaga slayed. Oo Daa'uudna markuu sameeyey, Saa'uul weli wuxuu ahaa boqorka. Laakiinse dadkii reer binu Israa'iil ah ayaa noqday mid aad u jeclaan of David. Waxay xitaa gabyi heeso ku saabsan sida la yaab leh ayuu ahaa, isaga barbar Saa'uul. Waxa uu noqday more caanka ah boqorka ka badan, kolkaasuu boqorkii yeelay ma jeclaan. Sidaas inkastoo uu lahaa King Saa'uul barako ka hor inta uu dilay Goli'ad, Saa'uul hadda eegay David sidii cadow oo uu. Markaasuu bilaabay inuu ku sameeyo wax walba oo uu kari waayeen inay dilaan. Sidaas daraaddeed markii David qoray SABUURRADII this, uu baxsad. Waa geesi dagaal ah oo la beddelay carcarara. boqorka ayaa dhimashada David tiro ka mid ah oo uu liiska mudnaanta. Waa David gees ah, oo wuxuu boqorkii iyo ciidankiisii ​​oo dhan.
Oo sidaas daraaddeed halkan Sabuurka 142 waxaan ka heli David, dhuumanaysey god. Waxa uu ka cabsi qaba in uu naftiisa, waana cidhiidhi in uu ka soo ooyaa in Ilaah.
Waan u qayshadaana, Rabbiga u; codkayga kor baan ugu qaadi Rabbiga u naxariista. Anigu waxaan idinku shubi doonaa cabasho isaga ka hor; isaga ka hor ayaan wax ka sheegi aan dhibaataysnaa. Markii naftaydu itaal darnaaday koraa igu dhex, waxaa kuwiinna jidka og yahay. In Jidka meesha aan dadka miyaanaydin u soconayn ayaa ii qariyeen dabin for. Bal eeg in aan xaq u leeyahay oo aan arko;ninna waa ka walaacsan ii. Waxaan leeyahay ma ahan goob magangelyo;ninna ma uu xannaaneeyo, waayo noloshayda. Anigu waan kuu qayshadaa, Rabbiyow; waxaan idinku leeyahay, "Waxaad tahay magangalkayga,,qaybtaydii dalkii kuwa nool. "Dhegayso qayladayda,waayo, aniga ayaa u baahan; Oo i badbaadi kuwa i eryanaya,waayo, way iga xoog bataan waa. Calan iga aan xabsiga free, Waxaa laga yaabaa in aan ammaaneen magacaaga. Markaasaa kuwa xaqa ah ku soo ururin doonaa aniga igu saabsan sababta oo ah wanaaggaaga ii. (Sabuurradii 142, NIV)
Waxaan dooneynaa in ay socdaan iyada oo qoraalkan. Oo waxaan u socoto in salaaddu David ka qabaa in ku dhow afar wax gaar ah waxaan ka baran ku saabsan Ilaah. Oo sidii aannu u dhex mara, waan arki doonaa in xitaa in times of dhibaato aad u xun, waxaan ka heli kartaa wax kasta oo aan u baahan tahay in Ilaah. Waxa ugu horeeya ee aan ku aragno waa in Ilaah waa u saaxiib ee times of dhibaato.
waxaan. Ilaah waa Friend In Times of Dhibaato
a. Ilaah Daryeelada
Habka ugu David baryaa dul male ah in Ilaah maqlaa. Wuxuu u muuqataa in uu leeyahay xiriir la leh Ilaah iyo in Ilaah run ahaantii dan ah oo ku saabsan waxa ka socda naftiisa. Waa dhab quruxsan cajiib ah marka aad u malaynayso oo ku saabsan. Ilaaha caalamka dan ah oo ku saabsan carcarara adhijir this. Fallaagadii qabaa waxaa laga yaabaa in Ilaah oo daryeel ah oo ku saabsan dhibaatooyin our ma run ahaantii dhib ama ka dhigi badan oo kala duwan yihiin. Yaa u baahan saaxiib la arki karin, marka wax walba oo noloshaada waa fowdo? Laakiin waxay noqon lahaa mid aad u qaldan. Xaqiiqada ah in Ilaah waa u saaxiib, in uu dan, farqiga u adduunka oo dhan. Haddii aan qof dan ah oo ku saabsan xaaladda beddelo sida ay u jawaabaan marka aad u sheegto oo ku saabsan.
Tusaale ahaan, waxa dhici lahaa haddii aan cable u soo baxay, iyo halkii uu ka wici aan shirkadda cable Waxaan u yeedhay bixiyaha Internet aan. Waa hagaag, waxaan wici kartaa oo waxaad ku tidhaahdaa dhan ah arrimaha aan la cable. Waxaan xasuusin kartaa sida aan joogey macaamiisha aamin, iyo caddayn iyaga oo ku saabsan sida naxay Waxaan ahay at adeegan waxshinimada ah. Laakiin maxaa yeelay, waxaan loo yaqaan tirada khalad, iyagu ma daryeeli. Oo iyana waxay tahay ma in ay isku dayaan in ay sameeyaan wax kasta oo ku saabsan. Dhab ahaantii, waxaan hubaa waxay xitaa ma daryeeli markii aan wac lambarka xaq ahay, oo ay marnaba wax ka qaban, laakiin waxaad ka heli waxa aan dhahayo. Waxaa muhiim in qof daryeela.
Haddaba waxaan jeclaan lahaa inaad qiyaasi waxa ay noqon doonto sida haddii Ilaah ma daryeeli ku saabsan dhibaatooyin our. Waxaan u qaylin karin inuu Ilaah maalinta oo dhan, laakiin ma ka dhigi lahaa wax farqi ah oo dhan. Weydii David haddii ay arrimaha in Ilaah dan. Fiiri dib aayadda hal.
Waan u qayshadaana, Rabbiga u; codkayga kor baan ugu qaadi Rabbiga u naxariista. Anigu waxaan idinku shubi doonaa cabasho isaga ka hor; isaga intaanan kuu sheego, dhibaato.
Tani waa nin khatar degdeg ah. Noloshiisa waa halis bay ku jireen. Waa sida uu dhisme gubanaya. Waa sida isagoo ka eryi by tuugo qoryo. Oo isna wuxuu ku dadaala uu caawimaad waan u qayshadaa. Waxaan qiyaasi karaa David godkii, dhidid sida uu ku tukanayo salaadda this.
Oo markii Daa'uud baryaa, uu fahamsan yahay in Ilaah waa saaxiibkiis oo wuxuu daneeyaa. Oo run in kaxeeya jidka ku socdeen ayuu ku tukanayo.
Wuxuuna ogyahay Ilaah ku maqlayaaye. Eeg aayadda lix. Waxa uu sheegay in, "Dhageyso qayladayda waayo, aniga ayaa u baahan." Hadda waxaan aadan u malayn in this waxaa isaga isku dayaya in ay Ilaah ka dhaadhiciyo in ay beddelaan ilaa iyo Dhagayso isbedel. David ayaa sheegay in this ka badan iyo in ka badan Zabuur. Waxaan qabaa David leh, "Waxaad balan qaaday in ay dhagaystaan ​​dadka aad marka aan ka hadlo in aad. Sidaas daraaddeed i maqal. Aan la hadlayo. "Waa sida uu isaga laga faaiidaysanayo on garbaha. Like, "Rabbi, dhegayso gacaliyahaagii. Waxaan hayaa wax aan odhan. "
Daa'uudna wuu ogaa oo ku saabsan record track Ilaah. Wuxuu ogaa in Ilaah axdi la dhigtay dadkan la. Wuxuu ogaa in Ilaah u ballanqaaday inuu iyaga la jiro. Wuxuu ogaa oo ku saabsan sida Ilaah uu maqlay salaadda iyo iyaga kaani oo kale mar samatabbixiyey. Oo isna wuxuu la filayaa in Ilaah isaga iyo sidoo maqli lahaa waqtigan.
Christian, ha idin baryayaaye aqoon this? Mise waxaad qiyaasi aad kaliya ku leh erayada? Ma idin baryayaaye la dareen ah daryeelka loogu talagalay Ilaah oo jecel idiin? Ma salaadda dhexgalka dhab ah la Ilaah ama aad erayo kaliya tuuray ilaa at saqafka? Ma kaliya dhaqan a? Waxaa muhiim ah in Ilaah waa u saaxiib daryeela.
Waxaan ku baran kartaa Jidka David baryaa. David waa dhab taraynin cabashooyinka inuu Ilaah. Imminka waxaannu garanaynaa in Kitaabka Ilaah na amrayaa in aan ka gunuunecina iyo caban. Laakiin halkan David noo muujinaysaa jidkii toosnaa, inaan ka hadli cabashooyinka. Isagu ma gunuunecina iyo sida reer binu Israa'iil waxay cidlada ku caban HORJEEDA Ilaah. Isagu ma caban hab u geliya dabeecadda Ilaah ama xukun su'aal. Isagu gelin Ilaah Maxkamad ma.
dhab ahaantii wuxuu sameeyaa horjeeda. Sida aynu arki doonaa ka dib ay Sabuurka David xaqiijinayaan wanaaggii Ilaah. Waa OK in hawada cabashooyinka aad Ilaah u, laakiin waxa ay sameeyaan si kalsooni buuxda isaga. Waa OK in Ilaah sheegi aad waqti u xoqdo. Laakiin marka aan ku ashtakeeyaan iyagoo Daalimiin ah - haddii si cod dheer ama qalbiyadeenna - in marka uu noqdo dembi.
Laakiin salaadda waa adag tahay in mararka qaar la fahmo. Mid ka mid ah heesaa, ee song ah oo lagu magacaabo Ilaah Gacaliye, hadlay oo ku saabsan salaadda sidan.
"Waxaan qabaa in uu mashquul ku qaban line fadlan / iigu yeedhina waalan waxaan laga yaabaa in u maleeyay in uu maanka ku akhriyi kari waayeen."
ilaa soobixiya wax dhibic wanaagsan. Ilaah og waxa aad ku fekereyso ka hor inta aadan isaga u sheegin. Haddii Ilaah wuxuu og yahay wax kasta oo, waxa dhibic ah ee isaga u sheegay? Ma kaliya layli in anshaxa? Waxaa i dhibayso markii Nasaarada hadlaan salaadda sidii goolkii ugu muhiimsan waa adiga oo leh Ilaah waafajin. Taasi waa run.
Waxaan isaga u sheegi maxaa yeelay, isagu wuu ina maqlaa, Waxa uu ku farxaa naga maqal, oo uu dan iyo had iyo jeer uu ka jawaabey in jacaylka (badan oo ku saabsan in ka dib). Laakiin fadlan ha Ilaah sheeg dhib. Qayli bax si. Waayo, cabashadaada. kor u codkaaga. halkan Baro David ka.
Isagu wuxuu dhawraa socda. Eeg waxa uu sheegay in aayadda saddex.
Markii naftaydu itaal darnaaday koraa igu dhex, waxaa kuwiinna jidka og yahay. In Jidka meesha aan dadka miyaanaydin u soconayn ayaa ii qariyeen dabin for.
Meel David eegay, Saa'uul dhuumanayay dabinnadii isaga u. Laba jeer uu isku dayay inuu dilo isaga markii uu ciyaaray kataaradda isaga u. Waxa uu tuuray waran isaga oo isku dayay in uu isaga wareemo oo uu derbiga. Saa'uul isaga ula kac ah u siiyey gabadhiisii, sida dabin isaga u. Waxa uu isku dayay in uu ka dhaadhiciyo wiilkiisa, Daa'uud BFF, inay dilaan. Haddaba Saa'uul iyo ciidammadiisa ayuu u yihiin isaga daba. Waxaa jira khatar ugu jeedin kasta.
Waan ogahay qaar ka mid ah oo naga mid ah ay dareemaan sida aan la xidhiidhi karaa David inaan halkaan. Waxaan dareemayaa in arrinta ma halkaas oo aanu u noqon jirto dhibaato. Waxaan dareemayaa nolosheena oo dhan waa daadsanaanta. Taasi waa sababta aynu tahay Dhibaataysan. Tani waa sida David dareensan.
Laakiin waxa uu sheegay in marka uu ruuxa wuu itaal darnaaday, marka uu ruuxa waa tabar lahayn, marka uu taag darnaataa, , waa Ilaah kan jidkiisa ogyahay. Waa Ilaah kan ogyahay waxa uu maraya.
Aayaddan afar uu ka sii Ilaah u sheegay oo ku saabsan waxa ka socda.
Bal eeg in aan xaq u leeyahay oo aan arko; ninna waa ay ka walwalsan ii. Waxaan leeyahay ma ahan goob magangelyo;ninna ma uu xannaaneeyo, waayo noloshayda.
d. No One Laakiinse Ilaah
David kala naagtiisa ka iyo saaxiibkiis ugu fiican oo kala duwan, Jonathan. Waxa uu wax bandanna boqortooyada. Waxa uu dareensan yahay sida cidna dan isaga ku saabsan, sida qofna isaga badbaadin karo. Oo weliba isagu Ilaah hortiisa tagaa. David ogyahay Ilaah waa saaxiib iyo in Eebe daryeeli doonaa inuu isaga u.
Waa maxay farqiga u ah in ka dhigaysa markii saaxiibo waxay u jeediyeen dhabarkooda aad on. Oo qoyska ayaa aad u neceb. Oo co-workers ma daryeeli adiga kugu saabsan. Derisyadeedii aad xitaa ma garanayaa kii aad tahay. Ilaah waa idin ogyahay oo Ilaah dan buu idinka leeyahay. Ilaah maqla baryadiinna. Ilaah wuxuu og yahay sida badan yihiin timaha waa madaxa kuu saaran. Wuxuuna ogyahay waxay xanuun iyo jahwareer aad haysato. Oo dareen this, Mu'min ah oo Ciise ma aha oo keliya.
Inta badan waxaan ku qaataan nolosheena isku dayayaan in ay la ogaaday by dadka kale, oo raba in ay fiiro iyo ixtiraam. Waxaan ka doonaynaa in ay ina daneeyaa. Ilaah dan! Ma jiro jasiiradda fog ama tagay dhismaha meesha Mu'min oo keliya ay noqon doontaa. Ilaah baa kula jira. Oo isna wuu idin jecel yahay. Oo wuxuu daneeyaa.
run, Ilaah oo aan sidii aad saaxiib aad tegi lahaa. Waxaa laga diiqadoodo lahaa haddii SABUURRADII halkan ku dhamaaday. Oo qaar badan oo ka mid ah laments adduunka ee ha waxaa soo afjaro. Laakiinse Daa'uud wuxuu og yahay in xitaa marka uu wax badan u oo keliya oo la dayacay ayaa dareensan, Ilaah dan. Oo wuxuu og yahay in maalinta uu u baahan yahay qof isaga u daryeesho, waa in uu u tartamayo in Ilaah.
Sidaas awgeed, waxaan ka heli kartaa wax kasta oo aan u baahan tahay in Ilaah, xitaa marka ay u xoqdo. Laakiin sida xaqiiqada ah Ilaah sida saaxiibkiis ma aha oo dhan waxaan u baahan nahay.
II. Ilaah waa Protection in Times of Dhibaato
Waxaan doonayaa in aan keeno mid ka badan wax uu sheegay in aayadda afar inaad fiiro. Waxa uu sheegay in, "Waxaan magan lahayn." Haddaba marka aan maqlo magan erayga, waxaan si toos ah u tagaan si ay tani dareen sarbeebta. Waxaan qabaa inuu la micno ah inuu u jirin mid u ordaan leeyahay. Taasi ma ahayn waxa uu halkaan waxaa loola jeedaa. Waxa uu ka dhigan tahay waxaan leeyahay guriga ma. Waxaan leeyahay hoy lahayn. Waxaan meel u leeyihiin in ay seexdaan. Anigu waxaan macno jidh qaawan. Ma uusan haysan khiyaar ee hubinaya in in albeergo a 6. Taas oo ah sababta uu dhuumanaysey god.
Sidaas awgeed, waxaan ka heli kartaa wax kasta oo aan u baahan tahay in Ilaah? Ilaah noqon karaa guri noo? Eeg aayadda shan.
Anigu waan kuu qayshadaa, Rabbiyow; waxaan idinku leeyahay, "Waxaad tahay magangalkayga,,qaybtaydii dalkii kuwa nool. "
First uu ku yidhi, Ma leedahay saaxiib, laakiin aad tahay saaxiibkay. Waxaan aadan haysan qof si aad u dhegaysato, laakiin waxaad maqli doonaa ii. Waxaan aadan haysan daryeele, laakiin waxaad qaadan doonaa daryeelka ii of. Haatan waxa uu ku yidhi, Waxaan aadan haysan hoy kasta, laakiin aad tahay aan hoy. Waxaad tahay magangalkayga,.
Intii aan la shaqeeyo on wacdintii this aan runtii uweyneysay on aayaddani waxa ay. Waxaan doonayay in ay noqon more inoo badan aayadda a koob oo kafee cute. Maxay tani dhab ahaan ka dhigan tahay in nolosha dhabta ah?
Waxaan arkay luqada magan this todobaadkii hore ay Sabuurka 141 aad. Oo annaguna waxaannu u dhammuna waxay wada arki badan Qorniinka. Ma uu ku yidhi in Ilaah waa hoyga jirka suugaan. Laakiin waxa uu ku yidhi oo ku dhex jira uu la'aan hoyga jirka ah, Ilaah waa nooc kale oo hoy isaga u. Ilaah waa uu magan galay.
Waa maxay waxa ay macnaheedu ma waayo, Ilaah in ay aad magan? Waxaan qabaa waxa ay la micno Isagu waa ilaalinta waxyaalaha kugu cabsi galin ee dunida ka baxsan oo dhan ka. In kastoo aan sameeyey guryaheena samada yar noo gaar ah oo ku saabsan dhulka la qalbiqaboojin iyo entertainments ee cayn kasta, ilaalinta muhiimad ahaan waa ujeedada hoy. Waa dhibaato si noo la difaaco - ka cimilada, ka tuugo, ka soo weeraray.
Dhegayso waxa David ayaa sheegay in ay Sabuurka kale uu ku qoray markii uu joogay godkii.
Ii naxariiso, Ilaahow, ii naxariiso, waayo, waxaad ku naftaydu adigay ku magan; hooska baalashaada waxaan u dunmi,ilaa ay dabeylo of pass baabba 'by. (Sabuurradii 57:1)
David ayaa la sheegay inuu ka qarin doonaa in Ilaah. Ilaah waa uu ka ilaalinta burburinta. More si gaar ah, Waxa uu ku yidhi in Ilaah naftiisa halleeya. At qayb ugu qotada dheer ee kan uu yahay, at uu core, wuxuu helaa uu magan galay in Ilaah.
ma Ilaah aad maanta magangal? Maxay yihiin hadalladan aad isku halleeyaa, waayo, ilaalinta? Waa maxay waxaa noloshaada, in haddii aad u lumin lahaa inaad dareento inaad qaawan oo furan si ay u baabba'aan? Ma lacagtaada? Ma xaaladdaada? weli Better, xaggee baad u ordaan in times of dhibaato? Xaggee baad dareemaan amaan? Ma in xiriirka ama shaqo in? Haddii ay sidaas tahay, ka dibna waxa aanu ka dhawaajin sida Ilaah oo kale waa in aad magan.
Ilaah Samaynta aad magan waa qaab ka mid ah waxyaalaha qalbiga ku jira. Waa trust a qoto dheer ee Ilaah sida ilaalinta. Waxaa la og yahay in la Ilaah nahay ammaan. David ogyahay naftiisa waa khatar, oo uu u dhibtooday, haddana weli wuu ka dareemaa nabad. Waa maxay meel la yaab leh in ay, weli tani waa meesha Mu'min kasta oo dunida ah oo ku dhacay waa in ay isu heli. Dhibaataysan, weli nabad. calool xun, weli had iyo goorba farxa.
Haddaba anigu ku yidhi, in maxaa yeelay, Ilaah wuxuu inoo yahay ilaalinta, Isagu ma noo oggolaanaysaa in aan la dhacay jirrabaaddaha kasta? Ma aha at dhan. Ka fikir waxa ku saabsan sida tan.
watch waxaan maanta inaan xirto waa biyuhu. Hadda oo macnaheedu ma aha in haddii aan u socon ka baxsan roobka ama aad daysaan iyadoo ku marka aan suxuunta lagu dhaqo, ma heli doonaan qoyan. Waa maxay waxa aanu macnaheedu waa in xitaa haddii gaadhka ma heli qoyan, waa mid aan la baabbi'in doonaa. Tani waxay la mid tahay qofka Muslinka ah. Ilaah ayaa balan qaaday in ay na sii ahaatid in duufaan, laakiin uu ballan qaaday in aan aan la baabbi'in doonaa. Waxaan heli karaa dhuftay by duufaanka, laakiin waxaan aan la baabbi'in doonin karaa.
Taasi micneheedu waa maxay? Romans 8 dhigayaa waxyaalaha ugu wayn waxaan qiyaasi kartaa dhacaya noo, oo ay ku jiraan dhimasho. Oo sheegay in xitaa dhex waxyaalahan oo dhan oo ka mid ah, nahay in ka badan ugu guulaysannaa xagga Masiix Kan ina jecel. Romans 8 sidoo kale waxa uu inoo sheegayaa in wax walba oo jeedin doonaa, waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee kuwa Ilaah jecel iyo waxaa loo yaqaan sida ay qasdigiisa.
Sidaas eegto, sida ilaalinta, Ilaaheenna ahu inoo ka wax walba oo ilaalin doona in jeedin doonaa in dhamaadka ah ee aannu dhib ama burburinta. Iyo inay iyaga waajib inooga raaxayn. Maxaa yeelay, waxaynu og nahay, haddii uu kuu ogolaanayaa waxay noo dhacay, waa aannu wanaaggayaga aawadiis iyo Ammaantiisu. Isagu wuxuu inoo yahay ilaalinta. Sidaas daraaddeed Daa'uud oo kale, "Yaa u baahan hoy jirka, marka aan Ilaah!"Ilaah waa baahida ugu weyn noo, iyo marka in mid ka mid ah baahida loo qabo waxaa la kulmay, dadka kale oo dhan eegto badan oo yar yar.
Sidaas daraaddeed mar dambe ayaan weydiin xaggee baad u ordaan in times Muslimaadka? Waxaan weydiinaya labada Nasaarada halkan maanta iyo non-Christian. Xaggee baad u ordaan? Dad badan oo inaga mid ah ayaa la socda in ay wax qalad ah. Waxaan ku yaacaya hoyga been ah. Iyo inay ahaato daacad ah, taasi waa nacasyo. Waxba ma ahan wixii in hoy been ah waa, waa in uu qof ama balwadda ah - waa khatar. hoyga Beenta ah been noo. Waxay u muuqdaan kuwo ammaan ah, laakiin ugu dambeyntii waxay keliya naga tegin more bandhigi. Iyagu ma ay naga burburinta ilaalin doona.
In Sharciga Kunoqoshadiisa, Muuse wuxuu ku hadlaa of sidii Ilaah ka buuxaan oo dadka ka jawaabi doonaan.
Markaasuu isna wuxuu ku odhan doonaa, “Bal meeye ilaahyadoodii [hadlayay sanamyadooda], dhagaxa, taas oo ay isku halleeyeen… Ha u kaca oo kaa caawin; iyagu ha idin daafaceen.” (Sharciga Kunoqoshadiisa 32:37)
dadka Ilaah la weeraray by quruumaha kale, iyo ilaahyadii been ah ay ku riday rajadooda - hoyga ay been - ma ay awoodaan si ay u ilaaliyaan. Ha ka Yeelina u ay khalad.
Sidoo kale, ma sameeyo qalad ka fikirida aad Ilaah xaq ka dhigi kartaa in aad magan marka waxa la joogaa wakhtigii. Kaliya in aad sugi doonaa ilaa uu helo xun ka dibna waxaad Qarinaysaan doonaa in Ilaah. Taasi macno lahayn at dhan. Waxaad ha sugin ilaa duufaanka yimaado inuu guri u dhiso. Waxaad ku nooshahay guriga, iyo inaad isku ilaaliyo marka ay bilaabanto roob. Ma aha in aad si argagixin marka ay bilaabanto drizzling, maxaa yeelay, waxaad horey naftaada qarsoon isaga. Taasi bilaabmaa jeestay dembigayga iyo kalsooni ku qabka in isaga, in aad loo ilaaliyo lahaa cadhadiisu xaqa ah ka. Oo waxaa sii by socda dib ugu maalin isaga ka dib markii maalin ka maalin.
Haddaba sida aynu la hadal oo ku saabsan ilaalinta Ilaah, waxaan aan iska eafiya iskana karo xaqiiqada ah in a maalmood laba ka hor wax xun ka dhacay Newtown, Connecticut. mid ka mid kale oo ka mid ah weeraro ballaaran on dugsi. Waxay ahayd kids aad u yar shan iyo lix jir. Taasi waa inoo cadhaysiin oo na murugoon. Oo musiibooyin sidan oo kale dadka weydiiso su'aalo.
Christian, waxa aad u socoto, in la yidhaahdo in aad saaxiib shaqada kuwaas oo sheegay in, "Halkee Ilaahiinna ah oo dhexdiinna of this ahaa? Waa maxay sababta ma uu ilaaliyo kuwa kids aan waxba galabsan? Maxaad Wuxuu ha dhacaan?"Maxaad dhihi kartaa in?
Waxa aan dhihi lahaa? Waxaan qabaa waxaan dhihi lahaa, Anigu garan maayo. War maxaad iigu ma halkii? Anigu garan maayo. Ma doonayo in la siiyo qaar ka mid ah jawaab falsafada ku saabsan dhibaatada xun. Qofna ma doonayo in uu maqlo in. Waxaan qabaa Waxaan dhihi lahaa, Anigu garan maayo sababta, laakiin waxaan ognahay Ilaah. Oo wuxuu u fiican. Ilaah inama uu dhan gaarka ah ee ku saabsan u sheegay sababta uu u oggolaanayaa in waxyaabaha qaar, laakiin waxa uu noo sheegay waxa uu sida. Waan ognahay uu wanaagsan, iyo caqliga leh, oo kuwa kaamilka ahuna. Waxa uu horey u xaqiijiyay in. Sidaas oo dhan aan samayn karo waa isaga isku halleeya, Ilaah u barya kuwa dhibanayaasha, oo la xusuusto in xaaladda ma aha sidaas u xun in aynaan ordi karaan in ay Ilaah.
Maxaa yeelay, xataa niyad jab ugu wadnaha ee xaaladaha, waxaan ka heli kartaa wax kasta oo aan u baahan tahay in Ilaah. Isagu wuxuu inoo yahay saaxiib iyo gargaarahannaga, laakiin waxaa jira dheeraad ah.
III. Ilaah waa Treasure our in Times of Dhibaato
Anigu waan kuu qayshadaa, Rabbiyow;waxaan idinku leeyahay, "Waxaad tahay magangalkayga,,qaybtaydii dalkii kuwa nool. "
Daa'uud ayaa ugu yeedhay Ilaaha qaybtiisa. qayb erayga Taas macnaheedu waxa weeye share a. Sidaas tani waxa ay tilmaamaysaa in aad share of dhaxal - qayb aad ee waxa ay ka tageen. Macnaheedu wuxuu noqon karaa abaalmarin gaar ah in ay kasbatay taada. Sidaas in xaaladda uu hadda, David waxba. Waxa uu ka fog gurigiisa oo mar dambe boqorka haybiyaan fiican ee.
Sidaas ayuu ku yidhi, "Waxaan qayb ka haysan, dhaxal, Ajir. Ilaah, aad tahay abaalgudkaygu. Waxaad tahay aan maal,. Adigu waxaad ii tahay wax walba oo!"Ilaah ahaa oo wax walba oo.
Aniga iyo xaaskayga waxaan daawanayay documentary this on ESPN toddobaadkan loo yaqaan jejebiyey. documentary waxa uu ahaa oo ku saabsan ciyaaraha fudud kuwaas oo isku mar ahaayeen milyaneerka, laakiin helay gabi ahaanba naftooda kala jejebiyey. Qaar ka mid ah kuwan guys macno dhigay boqolaal malaayiin, laakiin waxa oo dhan waxay afuufeen on guryaha, baabuur, dharka, iyo hab-nololeedka ah oo qaali ah. Oo iyagu waxay degganaayeen sidii wax, Xoolihiinnu, qalabka ahaayeen khasnadahoodii. Oo markay dhan laga badiyay waxaa ka mid ah, iyagu ma ay ogayn waxa la sameeyo. Qaybtoodii dhammaatay.
Markaas waxaa jira nin u eg Paul Rasuulka. Yaa ku Philippians ayaa sheegay in uu ka bartay inaan raalli ku ahaado, in uu hodan yihiin ama uu masaakiinta. Ma rabtaa in aad ogahay waxa ku maqan? Wuxuu ogaa in uu si dhab ah loo baahan yahay oo dhan wuxuu ahaa Masiixa. uu doonayay oo dhammuna waxay ahayd Masiix. Waxa uu diyaar u yahay inuu ku tuuraan wax walba iska in laga yaabo inuu Masiixu ahaa. Ilaah ahaa khasnaddiisa. Ha aad rabto in aad hesho in ay hal dhibic in?
Sida A.W. Tozer u dhigay in uu buugga The wadida Ilaah, "Ninka Ilaah wuxuu leeyahay, waayo, wuxuu maalka wax walba ee ka mid ah uu leeyahay."
b. Joy Aan ku saleysan Money
In light of this, farxaddiinnu ma noqon karo sii on xisaabaha bangiga our. Our farxad iyo nabad oo kor u bixin karto iyo hoos sida dhaqaale xasilloon waxaan dareemayaa, oo waa inaydnaan jirrabaadda ah mararka qaarkood. Waxaan u baahanahay nooca dhagaxa kalsooni adag in Ilaah, in ugu hawlantahay si ay u bixiyaan, laakiin in sidoo kale Ilaah isku halleeyey, in ka badan lacag. Waxaad u aamini karaa in lacag, laakiin waa fikrad xun. Waxaa jira ma jirto lacag aan la yeedhin karo ama la xado. Money ma socon doono, laakiin Ilaah doonayo. Waa in uu na maal,, xataa in times of dhibaato.
Sidee aad shaqo ka qaban kartaa hab in Ilaah ahmiyad gaar lacag? Miyuu jecel yahay iyo dabagalka lacag, aad raad Ilaah curyaannada iyo qaxar eegto? Haddii ay sidaas tahay, Ilaah laga yaabaa in aanay si dhab ah u noqon maalkiinnu. Waxaad isaga ayan u arkin sida abaalgudkiinnu waa run.
Haddaba wuxuu ku yidhi in Ilaah oo dhan waa in aan dhab ahaantii u baahan tahay ma aha in la yidhaahdo oo dhan baahida kale baaba'aan. Markaasaa waxaa taas ma aha call a in ay bilaabaan in ay u dayacan oo dhan of baahiyaha kale ee aad. Laakiin waa call a in ku xiran tahay badan oo ku saabsan baahida ugu weyn aad.
c. The Land of Nool
Inaad dareentid in Daa'uudna wuxuu yidhi, Ilaah waa qaybtiisa ku ah dalka kuwa nool. Waxa uu ku yidhi, Ilaah waa qof kasta oo aan leeyihiin iyo qof kasta oo aan hadda u baahan tahay in nolosha this. Sidaas uusan ku yidhi, Ilaah waa kaliya oo maalkiisa nolosha ee soo socda. Waxa uu hadda ku yidhi, Ilaah waa dhan waxaan u baahan tahay.
Waxaan ognahay inay jiraan qaar ka mid ah oo naga mid ah halkan maanta oo aan haysan wax kasta oo aan rabin in, oo waxaa laga yaabaa in aan wax walba oo aan u baahanahay. Laakiin haddii aad leedahay Ilaah, lagu dhiiri. Markaasaa Ilaah ku ammaaneen in baahida ugu weyn ee aad horay loo kulmeen Masiix.
Xataa marka aan dareemayaa waxaana ka maqan, waxaan ka heli kartaa wax walba oo aan u baahanahay in Masiix.
IV. Ilaah waa Bixiyaha in Times of Dhibaato
movies geesi- waa heshiis weyn hadda. maalin kasta oo aad eegto waxaa jira filim geesi- cusub. Batman, Superman, Spiderman, Monkeyman ... kaliya maxaa yeelay, haddii aad weli feejignaan. Markaas aad qabto noocyada kale ee filimada action sida Taken iyo James Bond. Waxaan jeclaan noocyada kala duwan ee filimada, maxaa yeelay, waxaan kaabayaasha dhaqaale badan nolosha geesiyaal kuwaas oo ay ku badbaadin karto maalinta oo dhan u muuqataa ciirsi. Well David muuqday sawir la mid ah halkan Ilaah. Eeg aayadda lix.
Dhegayso qayladayda,waayo, aniga ayaa u baahan;Oo i badbaadi kuwa i eryanaya, waayo, way iga xoog bataan waa.
b. u baahan
David mar waa Ilaah warramayay sidii uu u dareensan. Waxa uu u baahan. David waa dhamaadka naftiisa. Ma jiraan wax isaga ama cid kale samayn karto si aad isaga badbaadiyo ay. Waa in dhibaato. Oo waa in dhib waxan uu aado Ilaah. Mar kale David ogyahay oo ku saabsan Ilaah. Wuxuuna ogyahay in Ilaah aan macquul ma. Waxa uu lahaa mar hore aragnay Ilaah sameeyo wax aan macquul aheyn uu naftiisa in qaar ka mid ah dagaalo uu lahaa diriray. Haddii Ilaah ku siin karaan orso, iyo kooxda, oo askartiisii ​​buu u gacanta galay, markaas hubaal waa inuu isaga ka mid ahaa boqorkii is-Waali samatabbixin karo.
Laakiin eegto, aadan weydiiso wax haddii aadan aqoon aad u baahan. Wiilkaygiiyow ooyaa cunto, maxaa yeelay, wuxuu dareensan yahay gaajo, wuuna og yahay inuu u baahan yahay cunto. David ayaa dareensan in u baahan oo waxaa isaga keenaysaa inuu aad u qayliyo oo ay Ilaah u. Wuxuuna ogyahay in kuwa eryan waa xoog badan yihiin, waayo,. Wuxuu ogaa in Ilaah keliya isaga yaabaa free in xaaladda this gaar ah.
Oo aad aragto sida David weydiiyo. David ma weydiiso sida haddii uu xaq u leeyahay in laga caawiyo this. Aayaddan ka mid ah uu sheegay in uu weydiisanaya "naxariis." Waxa uu weyddiisanaya in aan heli lahaa waxa uu u qalmo, laakiin halkii ay wax uusan u qalmin: samatabbixinayo. Oo dadkii oo dhammu ah annagoo baryadayada waa isku mid noqon. Khushuucdo garashada in aad tahay mid aad u liita. Annagu ma u qalmaan wax. Laakiin waxaan Ilaah ka baryay inuu aqbalo naga samatabbixi.
Inta badan waxaan naftayda ku weydiin sida aan ku caawin kartaa saaxiib ah oo ay ku meel sidan. Sida iska cad, Ma doonayo inaan in ay kaliya ku odhan "Ilaah waa ku filan" oo kama dhigaan xaaladdooda. Waxa kaliya ee aan ogahay in ay sameeyaan waxaa ka caawiyo inay hesho meeshii Daa'uud waa. Sida kaniisad this hab Annagu waxaannu u adeegi karaan midba midka kale in times of baahan. Ka caawi inay hesho in dhamaadka naftooda marka ay aqoonsadaan oo ay u baahan yihiin isaga iyo isaga isku halleeya more. U soo ducee iyaga u, u jeclahay. Inta badan taasi oo dhan waannu wada yeeli karaa.
c. Amray inay Weydii Wixii Help
Waxaa nacasna ha noqon lahaa David in la tixgeliyo socda si qof kasta oo kale, marka xaaladdan si cad u ahaa ka bixi jiray, iyo kuwa kale oo la xakameeyo. Isla taa ayaa sax oo naga mid ah, laakiinse waxaynu u ordaan meelo kale mararka qaarkood. Laakiin na ugu baaqaysaa in ay u timid.
…i bari maalinta dhibi jirto; Waxaan kaa samatabbixin doonaa, oo aad i ammaani doontaa. (Sabuurradii 50:15)
Ilaaha u taliya iyo in ka badan mar kale isaga qudhiisa ayaa muujinaya sida badbaadiye Kitaabka. Sidee ku saabsan waxa Ilaah sameeyey Badda Cas? Maxaa ku saabsan nolosha reer Yuusuf? Maxaa ku saabsan dagaalo xad-dhaaf ah? Marka dhan u muuqataa wax aan macquul aheyn, Ilaah weli samatabbixin karaa. Ma jiro cadowga, kuwaas oo sharci istaagi kara isaga ka dhanka ah. Ciidammadu wuxuu dhici badan, buuraha sujuudi, oo dabaysha iyo hirarka joojin lahaa in joogitaankiisa. Oo record track oo waa mid cajiib ah. xitaa wuxuu u kacay dhererka weyn in ay dembi ka ina samatabbixin.
Salaadda oo Sabuur this, iyadoo ay dhib iyo degdeg ah, i xasuusineysaa salaadda kale ee Kitaabka Quduuska ah. Dhab ahaan, qofka tukanayay waa qof qaraabo ah oo wax badan ka dib ninkii qoray SABUURRADII this. Waxa ay i xasuusineysaa salaadda Ciise ee Garden of Getsemane. Ciise waa ogyahay uu iskutallaabta socda. Oo wuxuu Ilaah ugu cawday isagoo, iyo asal ahaan weydiiyo isaga haddii ay jirto jid kale. Waxa uu doonayaa in la gaarsiiyo ka xanuun ah in ka hor ahaa isaga. Uu cidhiidhiga si qoto dheer in dhiig sweated ahaa.
Ilaah uma Ciise ka soo dhibaatada iyo xanuunka la qiyaasi karo in ka hor ahaa oo isaga ka samatabbixiyo. Markaasaa Ciise aysan isku dayin baxsado. Wuxuu ogaa oo intaasu waxay ahayd waxa uu u yimid in uu. Ciise wuxuu u dhintay iskutallaabta. Markaasaa Ciise u dhegaysanayay iskutallaabta in, Waxa uu ka qaba si aniga iyo adiga oo aan lahaa leeyihiin in ay. Waxa uu qaato ciqaabta ayaan dembiyadiinna aawadood in uu ma samayn. Waxa uu ku noolaa nolol kaamil ah, Waxa uu lahaa ma xumaadeen Ilaah. Waxa uu la mid ma aha Daa'uud, ama aad, i ama. dembilayaasha oo badan ayaa xumaan Ilaah quduus ah Waxaan nahay. Isagu ma uu ahaa dambiile ah, weli uu dhintay dhimasho dambiile ah ayaa iskutallaabta in. Waxa uu la siiyey in ka badan in la dilo, si aan la samatabbixin kari waayeen.
Oo uu noogu yeedhay, in aan nafteena samatabbixin, laakiin in ay ku kalsoon tahay in Hero, kuwaas oo u yimid in ay naga heli. Waxaan ma aha inay dagaalka this guuleysan, waxa kaliya oo aan ugu cuslaataan kan durbaba. Rumeyseen on. isaga aamin. noloshaada sii Xaggiisa.
Runta waxa ay tahay, haddii aadan run ahaantii ku kalsoon tahay in Masiix, Ilaah ma aha saaxiib aad in times of dhibaato. Ma uu u yaboohay ilaalinta. Ma uu u yaboohay in uu noqdo maalkiinnu ama samatabbixiyahayga aad. Masiixiyiinta ha soo maraan waqtiyo argaggixiyeen, laakiin sheekada dhammaanaysaa u samatabbixiyaa. ma idinkaa?
e. Sababta ee u samatabbixiyaa
Calan iga aan xabsiga free,si aan magacaaga ammaani. Markaasaa kuwa xaqa ah ku soo ururin doonaa aniga igu saabsan sababta oo ah wanaaggaaga ii.
Halkan uu caddeeyo sababta uu u doonayo in uu la samatabbixin, sababta uu u doonayo in uu la xoreeyey - maxaa yeelay, wuxuu doonayaa in uu Ilaah ku ammaanaan sidii uu samatabbixiyahayga. Waxa uu tan u arkaa fursad kale, waayo, Ilaah inuu isu off.
Christian, sidee baad uga jawaabaan markii Ilaah idinka soo samatabbixiyey? Waxaan qabaa kartaa of badan, marar badan markii aan dareemay in dhib iyo qirtay leh Ilaah naxariis. Waxaan dareemay sida ay ahayd macno dhammaadka wakhtiga dunidu ku. Oo Ilaah ayaan tukashadayda ka jawaabay. Oo anna waxaan ahaa sidaas ku faraxsanahay. Oo gebi ahaan waxaan halmaamay ku saabsan Ilaah. Anigu ma aan aqoonin isaga ku ammaani. Anigu ma aan aqoonin isaga maamuusaan. Waxaan halmaamay isaga ku saabsan. Oo xataa ka Halmaamaan oo ku saabsan waxa uu sameeyey, taas oo u muuqata aan macquul ahayn.
Markii aan in yar kid ah, highlight aan sanad ahayd Christmas. Oo maalintii la xusuustay dhalashadii ii ahayd qiyaastii waqti this aad sidaa daraadeed waxa uu ahaa dheeraad ah oo gaar ah. ma Halkaa marka ay marayso in nolosha aad u badan. Waxaad helay Cheerios, aad naptime helay, oo aad heshay Christmas. Waxaan arkay giraangir commercials weyn on TV oo waxaan la mid ahaa neef, "Waxaan TGS waxay leeyihiin." Waxaan helay wheel weyn. Oo anigu waxaan qabaa inaan u badan tahay daadiyaan ilmada farxadda.
Hadda ma waxa uu noqon lahaa yaab leh haddii aan weydiistay in muddo bilo ah iyo bilaha, laakiin markii aan dib dugsiga helay iyo dadka i weydiiyay waxa aan ka helay, Waxaan halmaamay in aan xusuusto? Sidee qalaad waa, in aan la muddici karaa Ilaah hortiisa in noo naxariiso, laakiin maalmood ka dib iloobin sida haddii ay marna ka dhacay?
Waa in aan samayno wax kasta oo ay qaadanayso in la xasuusto naxariista Ilaah iyo baaqbaaq Quluubta mahadisaan, haddii uu journaling ama ku tukanayeen dad kale. Ma wax kasta oo ay qaadanayso.
Dhamaadka Sabuurka, David ayaa sheegay in kuwa xaqa ah la soo ururin isaga ku saabsan. Waxa uu ka dhigan tahay sidii uu ammaanay Ilaah wanaaggiisa, rumaystayaasha kale ee isaga ku biiri doono. Tani waa waxa aannu ku samayn on habeen Sunday sida aynu wadaagno, kuwaas oo markhaatifurkaaga nimcada. Waxaan maqli wanaagga Ilaah, waxaana ku hareeraysan mid kale oo isaga ku ammaani wada. Waa maxay badbaadiye weyn.
Waxaa jira xaalad lahayn si aad u xun in Ilaah yahay awoodi karin idiin dhiibi. Markii mid ka mid ma kaa samatabbixin karaa, Ilaah waa samatabbixiyahayga aad. Orod Xaggiisa.
Waxaan xusuustaa sidii waxar, fekerayo in waalidka aan xallin karo wax walba oo. Waxaa run ahaantii ma ahan wixii ka dhacay, Hoyaday iyo Aabahay u hagaajin kari waayay. Waxaan ma ahayn in ay ku riyoon jiray inuu guri oo deriska la 'socday, ama wacaya qaraabo. Kaliya waxaan u baxay inuu ka Hoyaday iyo Aabahay, maxaa yeelay, way i helay. Anigu ma aan aqoonin sida, laakiin waan ogaa waxay igu lahaa.
Waxaan u baahanahay noocan oo kale ah iimaanka childlike. Nooca rumaysadka qabanayaa, iyadoo aan loo eegayn waxa ay dhib ku, Haddaba waan tegi karaa inuu Ilaah u ahaado waxa aan u baahanahay. Aynu ku tukado.
Kathy • April 16, 2016 at 6:28 waxaan ahay • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi! Thanks, walaalkiis,
wadada • January 23, 2018 at 9:25 waxaan ahay • Reply
Ilaah ha idin barakeeyo, Anigu idin garan maayo. Laakiin waxaan ogaaday waxbariddan waa mid aad u waqtigii i waayo, waxaan ahay In wakhtiga dhibaatada uu Ilaahay hortiinna igu hadla dhex this article, Kor buu ii qaaday ayaan joogi jiray isagoo qaylinaya intii aan reading ahay waxaa la yaab leh in aad ogaato in qof taabto adeegga in aadan xitaa aad know.Thank